पूर्वीय दर्शन र आधुनिक समाजको फ्युजन - खोजपत्र
पूर्वीय दर्शन र आधुनिक समाजको फ्युजन
१६ माघ २०७७, शुक्रबार ०१:४५
कला साधना हो । निरन्तरको निरन्तरताले नै शिखरमा पुर्‍याउने हो । धैर्यता, लगनशीलता, मौलिक आयाम, नयाँ नयाँ प्रयोगले चित्रकारको चित्रकारितामा निखारता आउँछ । ‘अहिलेको निखारता त्यत्तिकै भने आएको होइन । यसका लागि मेरो जीवनका २५ वसन्त क्यानभासमा रङ पोतिँदै जाँदा आएको हो ।’ क्यानभासमा रङ पोत्न रमाउने र लामो समयदेखि निरन्तर रङ्गीविरङ्गि रङ पोतिरहेका चित्रकार रोशन प्रधानका अनुभवहरु अहिलेका नयाँ पिँढिलाई मार्गदर्शनको काम गर्न सक्छ ।
परम्परागत अनुकरणिय संस्कार, धर्म, संस्कृतिका विषयहरुलाई विम्वको रुपमा प्रयोग गरी आधुनिकतासँग फ्युजन गराउँदै क्यानभासमा रङ्ग पोत्नु उनको शोख हो वा भनौँ उनलाई एकदमै मनपर्छ । ‘अहिलेको समय मेरा लागि एकदमै फलदायी छ, विश्व महाव्याधीबाट अछुतो नरहेको नेपाल र महामारीले हरेक क्षेत्रलाई पारेको असरको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला तर मैले भने विदेशमा रहेका विभिन्न विधा अंगालेका चित्रकारहरुसँग सम्बन्ध बढाउन सफल भएको छु, जसले भविष्यमा नेपाल,नेपाली कला र कलाकारलाई विश्वसामु चिनाउन मद्दत गर्दछ । ’– प्रधान बताउँछन् ।
जसरी हरेक कुराको सबल र दुर्बल पक्षहरु हुन्छन्, त्यसैगरी नै विश्वमहाव्याधि कोभिड पनि उनका लागि फलिभूत सावित भयो । लामो समयदेखि विदेशी कलाकारहरुसँग चाहेर पनि कुराकानी गर्न असमर्थ रहेका उनलाई यस समयले घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण त्यो मौका मिलाइदियो । अहिले उनी विदेशी कलाकारहरुसँग सहकार्य गर्दै अनलाइन कला प्रदर्शनीमा व्यस्त छन् । भौतिक रुपमा कला प्रदर्शनी गर्न नसकिएपनि अनलाइन प्रदर्शनीले विश्वमा रहेका चित्रकारहरुमाझ हाम्रोनेपाली कला पुर्‍याउन मद्दत गरिरहेको रोशन बताउँछन् ।
‘अवस्था सधैँ यस्तै त रहिरहँदैन नि । त्यसैले पनि यो बेलामा चित्रकलामा आबद्ध अन्तराष्ट्रिय कलाकारहरुसँग भविष्यमा सहकार्य गर्न तथा एक अर्काको देशका कलालाई एक अर्कामा साटफेर गरी चित्रकलाको माध्यमबाट धर्म, संस्कार, परिवेश जस्ता कुराहरुको ज्ञान आदान प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ’–रोशनले थपे ।
क्यानभास र कुची लिएर बस्दा दर्शन, संस्कार, धर्मसँग आधुनिकतालाई जोडेर चित्र कोर्दा बढो आनन्दको अनुभुती हुने उनी बताउँछन् ।
उनका चित्रकलामा पूर्वीय सिद्धान्त तथा ग्रन्थमा उल्लेखित पात्रहरुलाई आधुनिक रोबटहरुसँग फ्युजन (समिश्रण) गराइएको पाइन्छ । ‘जब मानव सभ्यतालाई आधुनिकताले जित्नेछ तब यस पृथ्वीमा मानवमाथी रोबटको राज हुनेछ र मानव र मेसिनको संसर्गबाट निस्कने सिर्जनाले यस विश्वलाई कता पुर्‍याउला ?’– उनको प्रश्न थियो । आधुनिकताका नाममा हाम्रा धर्म संस्कार नहराउन भनेर नै उनका क्यानभासमा रोबट र मानिसका आकृतिहरु पोतिएका हुन् ।
प्रकृतिको सिर्जना मानव लगायत यावत जीवहरु हुन् । विकासक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा मानवले आफुलाई चल्नका लागी विभिन्न धर्म, संस्कृती र संस्कारहरुको विकास गर्दै गए । ती ज्ञानबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन । जसरी एउटा रुखले अजङ्गको रुप लिएर, जतासुकै हाँगा फैलाए पनि त्यसको मूल जरा नै हुन्छ । पौराणिक पात्र र आधुनिकताको सम्मिश्रणबाट बनेको चित्रकलाले आगामी पुस्तालाई हाम्रो मूल के हो भन्ने सन्देश दिने काम गर्दछ । त्यस्तै, वर्तमान परिवेश, आधुनिक सोच र चिन्तनलाई एकदमै सहज र महत्वपूर्ण तरिकाले दर्शाउनमा समेत यस्ता चित्रकलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रोशन बताउँछन् ।
आफुले सिकेका ज्ञान र शीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न उनले प्यागोडा इन्स्टिच्युट पनि खोलेका छन्, यो संस्थाले अहिलेका बालबालिका र युवापुस्तामा हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृतीको हस्तान्तरण हुँदै जाने रोशन बताउँछन् । साथै, साना भाइवहिनीहरु स्थिर रहिरहन सक्दैनन् र चित्रकला सिकाउँदा चित्रकारमा धैर्यता नरहने तथा बाल मनोविज्ञानलाई नबुझ्ने हो भने कला पुस्तान्तरण हुन कठिन हुने रोशनको अनुभव छ ।
अनलाइनबाट चित्रकला सिकाउनको लागि निश्चित उमेर पुगिसकेका विद्यार्थीहरुलाई सहज हुन्छ । उनिहरु भित्रैबाट सिक्नको लागि पनि उत्सुक हुन्छन् । अहिलेको विश्वमहाव्याधि (कोरोना) बाट उनले सिकेको पाठ पनि यही हो ।
कुराकानीको प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै थियो, करिब ८ वर्ष अगाडि नेपाली कलालाई भारतमा पनि चिनाउनको लागि उनि काठमाडौंबाट भारतको कलकत्ता प्रस्थान गरे । त्यतिबेला आफ्नो कलामाथि भारतका चर्चित चित्रकार वासिम आर. कपुरले उनको चित्रकला हेरिसकेपछि सुझाव दिए– ‘तपाइले आफ्नो कलालाई अझ परिष्कृत गर्नका निमित्त प्राचिन प्रतिकहरुलाई आधुनिकतासँग जोडेर रङ्ग पोत्नु भयो भने तपाइको भविष्य उज्ज्वल छ ।’ ती चित्रकारले दिएको सुझाव रोशनका मनमा गढे र उनले आफ्नो कलालाई सोही अनुरुप आजसम्म परिष्कृत गर्दै आइरहेका छन् ।
अन्तरमनमा रहेका विम्वहरुलाई अनौठो रेखाको रुपमा अभिव्यक्ति दिनु नै अतिवाद (सररियालिजम) हो । त्यसैले आधुनिक कलामा अतिवादलाई मिसाउँदा चित्रकला झन् आकर्षक देखिन्छ र सोही अनुरुप उनका चित्रकला विम्वित छन् ।
प्राचिन प्रतिक र बिम्बहरुको सम्मिश्रणमा आधुनिकतालाई जोड्दै चित्र कोर्ने रोशन कहिलेकाहीं कसैका लागि कोरिदिनुपर्ने चित्रहरु आफ्ना अन्तरमनका नहुने बताउँछन् र त्यस्ता चित्र बनाउनु पर्दा त्यति आनन्द नआउने उनको तर्क छ ।
‘दिउँसोको समयमा अन्य कामहरुको व्यस्तताले क्यानभासमा रङ्ग पोत्न भ्याउँदिन तर रात त मेरो हो नि ! त्यस समयमा क्यानभासमा रङ्ग पोत्न कुनै कुराले पनि मलाई विचलित गराउँदैन । जसका कारण म चित्रकलाबाट विमुख छैन भन्ने भान हुन्छ ।’
कुनै पनि कार्य गर्दा एक्लैले गर्नुभन्दा समुह बनाइ काम गर्दा त्यसले एक अर्कामा शिप र ज्ञान आदान प्रदान गर्न एउटा भूमिका पनि खेल्दछ । यही मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै उनले प्यागोडा कला ग्रुपको परिकल्पना गरे । सोही समूहमार्फत अहिले रोशन देश तथा विदेशमा आफ्ना कलाको प्रदर्शनी गर्न व्यस्त छन् ।
चित्रकलामा साधनारत पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता विचको भिन्नताले कहिलेकाहीं उनमा खिन्नता छाउँछ । ‘हाम्रा अग्रजहरुको पालामा रङ्गहरु बनाउन ठूलो परिश्रम गर्नुपथ्र्यो, हामीले पनि हाम्रा गुरुहरुसँग बसेर कठिन मिहिनेत गरेर आजको अवस्था सम्म आइपुग्यौं । तर हामी भन्दा पछाडिका पुस्ता प्रविधिसँग बढी अभ्यस्त भए । सबै कुरा प्रविधिले नै गरिदिने भयो, तात्विक ज्ञान र परिश्रम नगरी उनीहरुले सहजै आफुले चाहेको कुरा भेट्ने भए , जसले भविष्यमा हाम्रो मौलिकता गुम्न सक्ने संभावना छ’– उनले चिन्ता व्यक्त गरे । चित्रकलामा लाग्न चाहने बालबालिका तथा युवा पुस्ताले कलालाई आत्मसाथ गर्नको लागि धैर्यता, लगनशिलता र निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्ने सन्देश रोशनले दिन चाहेका छन् ।
Previous शुभकामना उनिलाई
1 thought on “पूर्वीय दर्शन र आधुनिक समाजको फ्युजन”
Ekdm raamro bastabik kura chitrakar le prastut garnu ko saathai bhannu bhayeko cha